Canaan Waayeel Oo Ku Wajahan Aqoonyahanka Is Magacaabay Ee Dabarka Goostay Iyo Dawladan Aamuska Xeelad Siyaasaseed U Haysata. – somalilandtoday.com
Waxaa yaabka yaabkiis umadda reer Somaliland ku noqotay in ay ka war helaan dood ka dhacday Jabuti oo ay soo qabanqaabiyeen, Machad loogu yeedho Heritage oo qadiyada Somaliland lagaga doodayo ama qof walba waxay la tahay uu soo bandhigayo. Hada waa go’aankii umadda Somaliland ay ku gaadheen in ay dawladnimadoodii Somaliya kala soo noqdaan. Aqoonyahankan fududaay, qarkood waxayba u hadlayeen oo ay kuwa Somaliya ka socday waydiisanayeen in hoos loola eego waxa ay Somaliland tabanayso, si loogu gudbo waji kale oo lagu gaadhi karo isku soo noqosho kale. Wuxuu machadkani isugu yeedhay ilaa boqol iyo dheeraad qof oo ka
socda Somaliya , dhawr reer Somaliland ah iyo Intii ugu necbayd jiritaanka Somaliland. Aqoonyahankii Somaliland shirka noocaas ah ayay dhex fadhiisteen oo la isla soo hor fadhiistay “adiga maxay kula tahay iyo adigana maxay kula tahay”. Sunxaanaka Yaa Cadiim, shidanaaba shidan. Hadaba, aqoonyahan, aan far waawayn kuugu qoro eh, arinkan idinka dood iyo fikir dhiibasho idiinla muuqdaa, waa go’aan umadeed oo sharci ah, kuna yimid wada tashiyo qoto dheer oo si mug leh looga baaraan degay. Mararka qaar waxaan meelahaa ku arkaa aqoonyahan Somaliland u doodaya, oo marka ay difacayaan dawlad la soo noqoshada Soamliland, ku saleeya doodoo arimo ay ka mid yiihiin: Haddanu reer Somaliland nahay waa nala laayey, Dawladii ayaan wax misaan leh nagala siin, IWM. Iyadoo qodobadaasi ka mid yihiin wixii dhariga karka ka keenay, hadana ma aha tiirarka ugu waawayn ee ay Somaliland dib uga soo noqotay hehiiskii 1960-kii. Walaaluhu had iyo goor waa isdagaalaan, waana ka heshiiyaan oo inta gar laguugu yimaado ayaa lagaa xaal mariyaa, khasaaraha ku gaadhayna waaba laguu mag dhabaa, Dawladdii lagaa qadiyeyna waaba laguu wada dhiibi karaa hadii ay intaa tahay waxa aad uga noqonayso heshiiskii lagu midoowbay.